Elekwasị anya na Jesus | Apg29
Elekwasị anya na Jesus
Ihe ị na-emeri na-ekwusa ozi ọma banyere ọha iwu, Agenda 2030 na na ihu igwe?
Ị maka Jesus Christ ga-abịa ọzọ? Obi gị ọzọ na-elekwasị anya nsogbu n'ụwa ebe a na ihu igwe nsogbu na Agenda 2030?
Anyị bi taa n'ụwa ebe anyị na-ahụ ndị dị ndụ na nchegbu. Ma mgbe m na-agụ Bible, ọ na-ekwu:
"Agwa na-egosi onwe-ha na anyanwụ na ọnwa na kpakpando, na n'elu ụwa ka mba nile ga-abụ na nhụjuanya na-agbagwoju; oké osimiri na ebili mmiri. Ndị mmadụ ga-nkwusi nku ume egwu na atụmanya nke ihe ga-adakwasị ụwa, n'ihi na ike nke eluigwe ga-maa jijiji. mgbe ahụ ị ga-ahụ Nwa nke mmadụ na-abịa n'ígwé ojii n'ike na ebube dị ukwuu. + ma mgbe a na-amalite na-eme, mgbe ahụ, na-agbatịnụ na ebuli gị isi, n'ihi na nnapụta unu na-eru nso. " Luke 21: 25-28.
Elekwasị anya na ihu igwe?
Anyị izute taa, ndị mmadụ nwere nchegbu ihe karịrị ihe na-eme ka anyị na ihu igwe, na ebe anyị na-enwe ike na-ekwusa Gospel bụghị na Agenda 2030 ma ọ bụ ihu igwe iwu. Anyị ekwesịghị-elekwasị anya na gburugburu ebe obibi, Agenda 2030, ma ọ bụ na-elekọta mmadụ iwu, ma anyị na-elekwasị anya bụ nwere anya gị na Jizọs Kraịst na-abịa. Ihe ị na-emeri na-ekwusa ozi ọma banyere ọha iwu, Agenda 2030 na na ihu igwe?
Anyị dị ka Kraịst na-ekwesịghị na-ata ahụhụ site na nchegbu dị ka ụwa ụmụ. The jupụtara n'obi ka ọnụ ya na-ekwu okwu mgbe mgbe. Ị maka Jesus Christ ga-abịa ọzọ? Obi gị ọzọ na-elekwasị anya nsogbu n'ụwa ebe a na ihu igwe nsogbu na Agenda 2030? Jizọs sịrị:
"Ma, kpachara anya nke-erikpu obi unu na aṅụrụma, ịṅụbiga mmanya ókè na nchegbu nke ndụ ka ụbọchị ahụ na mberede n'elu unu dị ka ọnyà, n'ihi na ọ ga-emetụta ndị niile bi n'elu uwa nile. Nwee mgbe niile na-amụ anya na-ekpe ekpere maka ike ịgbapụ ihe niile na uche eme na iguzo n'iru Nwa nke madu. "
Kama na-ekwu okwu banyere ọha nsogbu, idụhe nsogbu na na, ka anyị na-ekwusa banyere alaeze eluigwe. Otu ụbọchị, Jizọs Kraịst ga-abịa azụ ma na-ezi ndị na-alụ ọhụrụ na ị dị njikere maka ụbọchị ahụ? Ka ọ bụ na i nwere ihe na-elekwasị anya bụ onye àmà na-egosi?
The eluigwe agbamakwụkwọ
Agụsi m agụụ na-ke eluigwe alụmdi na nwunye, na m na-elekwasị anya bụ na ị ga-ahụ ụbọchị mgbe Jizọs Kraịst ga-ekporo ya na-alụ ọhụrụ! Teta, unu ndị na-ehi ụra n'oge na-adịghị otú Jizọs ga-Christ Eze nke Ndị Eze ọzọ. Ebe a na njedebe, ụfọdụ akụkụ Bible ndị na-agụ ma na-echebara.
2 Pettrusbrevet 3: 3-4 Karịsịa, ị ga-echeta na n'oge ikpeazụ scoffers ga, eduzi ọchịchọ nke onwe ha na-mock gị, sị: "Gịnị banyere nkwa nke ya na-abịa? Nna anyị hà ama akpa, na ihe niile bụ ihe dị ka ọ na kemgbe e kere eke nke ụwa. "
1 Ndị Tesalonaịka 5: 2-3 maka ị maara nke ọma na ụbọchị Jehova na-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Dị nnọọ mgbe ndị mmadụ na-asị, "Ihe niile bụ ihe udo na ntụkwasị obi," mgbe ahụ ọdachi dị ka mberede dị ka mgbu mgbe a nwaanyị ga-amụ, na ha agaghi-gbapụ.
Matthew 24: 29-30 Ozugbo mkpagbu nke ụbọchị ndị ahụ ga-anyanwụ-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghịkwa enye ìhè ya. The kpakpando ga-esikwa n'eluigwe daa na ike nke eluigwe maa jijiji. Mgbe ahu ka Nwa nke mmadụ na-agụ akụkọ na-egosi na elu-igwe, mgbe ahụ ga-ebo nile nke ụwa na-eru újú, ma ha ga-ahụ Nwa nke mmadụ na-abịa n'ígwé ojii nke eluigwe n'ike na ebube dị ukwuu.
2 Timothy 3: 1-5 Nke a mara nwekwara, na n'oge ikpeazụ, oge siri ike. Mgbe ahụ ndị mmadụ ga na-eche naanị banyere onwe ha na ego; ha na-aghọ na-etu ọnụ, ịdị mpako, na-akparị, na-enupụrụ ndị mụrụ ha, na-enweghị ekele, ndị ajọ omume, na-enweghị ịhụnanya, enweghị mgbaghara, full of nkwutọ, ekweghị nchịkwa, obi ọjọọ, ọ bụghị n'ihi ezi, na-aghọ aghụghọ, aghara na nganga. Ha n'anya ụtọ karịa Chineke. Ha na-ebu piety ka a nkpuchi ma denying ike ya. Nọrọ n'ebe ha.
Daniel 12: 4 Ma unu, Daniel, ga na-edebe okwu ma mechie n'akwụkwọ ruo mgbe ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ. Ọtụtụ ndị ga na, ihe ọmụma ga na-amụba. "
Luke 21: 25-26 ga-enwe ihe ịrịba ama na anyanwụ na ọnwa na kpakpando, na ụwa ga-mba-na nhụjuanya na-agbagwoju; oké osimiri na ebili mmiri na-ebigbọ. Ndị mmadụ ga-anwụ anwụ nke egwu na atụmanya nke ihe na-abịa na ụwa, maka ike nke eluigwe ga-maa jijiji.
Matthew 24: 42-44 Watch Ya mere, n'ihi na unu amataghi ihe hour Onyenwe gị abia. E nwere ị ga-aghọta na ọ bụrụ na ulo nwe maara ihe oge nke abalị ka ndị ohi bịara, ọ ga-anọ na-amụ anya ma na-edebe ya si na-agbasa n'ime ụlọ. Ya mere, ị na-adị njikere, n'ihi na mgbe ị na-atụghịdị anya ya, mgbe Nwa nke mmadụ nābia.
Matthew 24: 23-24 Ọ bụrụ na unu na-gwara: Ị bụ Kraịst, ma ọ bụ n'ebe ahụ; kwere na ọ dịghị! Ụgha nzọpụta na ndị amụma ụgha ga-eme oké ihe ịrịba ama na ihe ebube na-eduhie, ma ọ bụrụ na o kwere omume na-ahọpụta.
1 John 2:18 My ụmụ, nke a bụ oge ikpeazụ. Unu nuru na-emegide Kraịst ga-abịa, ọbụna ugbu a, ọtụtụ na-emegide Kraịst na-abịa. Site na nke a anyị na-aghọta na ọ bụ oge ikpeazụ.
Nke a bụ a na-agụ email, echiche na-ahụ onye dere ada.